खोजी ईन्जिन अनुकूलनमा के फाइदाहरू र आरओआई हुन्? | Martech Zone
खोजी ईन्जिन अनुकूलनमा के फाइदाहरू र आरओआई हुन्?
जब म पुरानो लेखहरूको समीक्षा गर्दै थिएँ मैले खोज इन्धन अनुकूलनमा लेखेको थिएँ; मैले पत्ता लगाए कि यो अब एक दशक भन्दा बढी भएको छ कि म दिशा प्रदान गर्दैछु। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेशन केहि वर्ष पहिले यसको चरम मा पुगे, एक बहु-अरब उद्योग कि आसमान छ तर पछि अनुग्रहबाट गिर। जबकि एसईओ परामर्शदाता जताततै थिए, धेरैले आफ्ना ग्राहकहरूलाई शub्कास्पद मार्गमा डो leading्याउँदै थिए जहाँ उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगरी सर्च इन्जिन खेल्दै थिए।
मैले मानक, क्लिच लेख पनि लेखें SEO मरेको थियो मेरो उद्योग मा ती को त्रास को। यो थिएन कि मैले सोचे कि खोज इञ्जिनहरू मरेका थिए, तिनीहरू प्रासंगिकतामा वृद्धि गर्न र कर्पोरेट डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूमा प्रभाव निरन्तर बढाउँदैछन्। यो हो कि उद्योग मरेको थियो, आफ्नो बाटो हराइसकेको। तिनीहरूले मार्केटिंगमा ध्यान केन्द्रित गर्न छाडे र, यसको सट्टामा, एल्गोरिदममा ध्यान केन्द्रित गरे र उनीहरूको शीर्षमा ठग्न खोज्ने कोशिश गरे।
प्रत्येक दिन, म अनुरोध गर्दै, भीख माग्दै, वा यहाँ सम्म कि ब्याकलिंक्स को लागी भुक्तानी गर्न पनि प्राप्त गर्दछु। यो विस्मृत छ किनकि यसले समुदायलाई पूर्ण सम्मानको कमी देखाउँदछ जुन मैले गत दशकमा मूल्य र विश्वास निर्माण गर्न काम गरेको छु। म कसैको श्रेणीको लागि जोखिममा राख्न जाँदैछु।
यसको मतलब यो होइन कि म अझै आफ्नो साइटलाई खोज इञ्जिन वा मेरो ग्राहकहरूको लागि अनुकूलित गर्दैमा मेरो चिन्ता गर्दिन। खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन हाम्रा ग्राहकहरूको साथ ठूला र सानाको साथ प्रत्येक प्रयासको एक आधार बन्न जारी छ।
ह्यारिस मायर्सले यो इन्फोग्राफिक विकास गरेको छ, एसईओ: किन तपाईंको व्यवसायलाई अहिले आवश्यकता छ?, यसले छ वटा कारणहरू समावेश गर्दछ किन प्रत्येक व्यवसायसँग जैविक खोज रणनीति हुनुपर्दछ।
एसईओ को फाइदा
अनलाइन अनुभव खोजीबाट सुरू हुन्छ - today's%% आजका उपभोक्ताहरूले उत्पादन र सेवाहरू हेर्न खोजी ईन्जिन प्रयोग गर्छन्
SEO धेरै लागत प्रभावी छ - %२% मार्केटरहरूले एसईओलाई अझ प्रभावकारी हुँदैका रूपमा हेर्नुहोस्, %२% ले उल्लेखनीय वृद्धि देखी
SEO ले उच्च यातायात र उच्च रूपान्तरण दर उत्पादन गर्दछ - billion अर्ब मानिसहरूले प्रत्येक दिन इन्टरनेट खोज्छन् किवर्डहरूको साथ अत्यधिक प्रासंगिक, लक्षित ईन्टेन्टफुल खोजीहरू।
एसईओ आज प्रतिस्पर्धा मा सामान्य हो - श्रेणीकरण केवल एक comapny एसईओ क्षमता को एक सूचक हैन, यो तपाइँको उद्योग मा आफ्नो comapny समग्र अधिकार को एक सूचक हो।
एसईओ मोबाइल बजार को पूरा गर्दछ - स्थानीय मोबाइल खोजको %०% स्टोरले भ्रमणको लागि नेतृत्व गर्दछ
एसईओ सदा परिवर्तनशील हुन्छ र यसका अवसरहरू पनि - खोज ईन्जिनहरूले तिनीहरूको एल्गोरिदम सुधार गर्न र व्यक्तिगत अनुभव र दर्जी परिणाम ग्राहक अनुभव अधिकतम गर्न जारी राख्छ। SEO केहि तपाइँ होइन do, यसको लागि दुबै खोजी ईन्जिन परिवर्तनहरू र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूबाट गरिएका प्रयासहरूको अनुगमन गर्न निरन्तर ध्यान आवश्यक छ।
SEO को ROI
एसईओ को लागी लगानी फिर्ताको बारेमा सम्झन पहिलो कुरा यो छ कि यो समयको साथ अस्थिर हुन जान्छ। यदि तपाईं अप्टिमाइज गर्न र उल्लेखनीय सामग्री उत्पादन गर्न जारी राख्नुभयो भने, लगानीको फिर्ती समयसँगै बढ्नेछ। एक उदाहरण को रूप मा, तपाइँ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शब्द मा एक इन्फोग्राफिक उत्पादन र लगानी अनुसन्धान, डिजाइन, र पदोन्नति मा $ 10,000 छ। पहिलो महिनामा, तपाईंले अभियान कार्यान्वयन गर्नुभयो र केहि लीडहरू पाउनुभयो र सायद एक रूपान्तरण पनि $ १,००० मुनाफाको मानको साथ। तपाइँको ROI अप-डाउन छ।
तर अभियान अझैसम्म आफ्नो अधिकतम फिर्ती प्राप्त गर्न को लागी छ। महिना दुई र तीनमा, इन्फोग्राफिक धेरै उच्च-अख्तियार वेबसाइटहरूमा टाँसिएको छ र एक जोडीमा प्रकाशित हुन्छ। परिणामस्वरूप क्रेडिटले विषयको लागि तपाइँको साइटको अधिकार बढाउँदछ र तपाइँले केहि महिनाहरूमा दर्जनौं कुञ्जी शव्दहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्न थाल्नुहुन्छ। इन्फोग्राफिक र सम्बन्धित पृष्ठ वा लेख प्रत्येक महीना दर्जनौं बन्द संग सयौं नेतृत्व प्राप्त गर्न सुरु। अब तपाईं एक सकारात्मक ROI देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो ROI अर्को दुई बर्षहरूमा वृद्धि गर्न जारी राख्न सक्छ।
हामीसंग एक ग्राहकको लागि एक इन्फोग्राफिक छ कि ध्यान पहिलो वर्ष पछि सात बर्ष ध्यान प्राप्त गर्न जारी छ! उल्लेख नगर्नु जुन हामीले बिक्री कोलटेरल र अन्य पहलहरूको लागि सामग्रीको उपयोग गरेका छौं। त्यो इन्फोग्राफिकको आरओआई अब हजारौंमा छ!
टैग: एसईओ को लाभजैविक खोजजैविक खोज रैंकिंगएसईओएसईओ बेनिफिट्सserp